မာရီယာ vazquez | 22/07/2021 18:00 | ငါဘာဝတ်တာလဲ
ယခုရာသီတွင်ရှာရန်မလွယ်ကူပါ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဖက်ရှင်ကတ်တလောက်၌တည်၏။ အဲဒီမှာမရှိဘူးလို့ငါတို့မပြောချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူး၊ ဤသို့သော်ငြားလည်း Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောကြောင့်ဤအဝတ်အစားကို ဆက်၍ လောင်းနေကြသည်။
ရှပ်အင်္ကျီအနေနှင့်၊ ရှပ်အင်္ကျီအနေဖြင့်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီအနေနှင့် ... ရှပ်အင်္ကျီအနေဖြင့်နှစ်၏ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာအလွန်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည် ဒီနှစ်မှာတော့သင်ဟာဂန္တ ၀ င်ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေမလားဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးအလွန်ကွဲပြားတဲ့အဆိုပြုချက်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ timeless နှင့်စွယ်စုံအဝတ်ကိုရှာဖွေနေလျှင်, ဂန္ဂျင်းဘောင်းဘီအင်္ကျီကိုရွေးချယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အတူဝါဂွမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏ အနားနှင့်ရှေ့အိတ်ကပ် rounded, သင်သည်သူတို့ကိုအရိပ်အမျိုးမျိုး၌တွေ့လိမ့်မည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောဗားရှင်းရှိ Massimo Dutti (ဤအပိုဒ်အောက်တွင်) နှင့် Zara (အဖုံးတွင်) တွင်ရှာပါ။
ဤဂန္ထဝင်အုပ်စုတွင်ရှပ်အင်္ကျီလည်းထည့်နိုင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမှောင်ဘေ့, သင်အခမဲ့ပြည်သူ့မှာရောင်းရန်တွေ့လိမ့်မည်။ လတ်ဆတ်သောဂန္ထဝင်ဗားရှင်းတစ်ချိန်တည်းတွင်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မင်းဂျင်းဘောင်းဘီ.
လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောနိုင်ရန်ဂျင်နင်ရှပ်အင်္ကျီတွင်မည်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသင့်သနည်း။ မာကြောတဲ့လက် ၎င်းတို့သည်ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% ရေရှည်တည်တံ့သော Lyocell တွင်ပြုလုပ်ထားသော Massimo Dutti ၏အဆိုပြုချက်များကို ပို၍ မကြိုက်ပါ။
Ruffles နှင့် Garter ကော်လာ ဒီအင်္ကျီတွေကို "ခေတ်မှီ" အဖြစ်ခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြားဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။ Free People တွင်ဤအမျိုးအစားကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒီအထူးအဝတ်အစားမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းများထဲက။ ဒါ့အပြင်ဒီအရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရောင်တွေထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကော။ Lilac သံသယမရှိဘဲ, ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာပါ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » ငါဘာဝတ်တာလဲ » အရသာအားလုံးအတွက်ဒင်းနစ်ရှပ်အင်္ကျီ